Fampidirana ny Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Tube Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) dia fantatra amin'ny anarana hoe PTFE, Teflon ary Plastic King. Ny Teflon extruder dia masinina izay manampahaizana manokana amin'ny famoahana ptubeuct PTFE (UHMWPE). Amin'ny alàlan'ny andiana dingana toa ny fitrandrahana, ny fanafanana ary ny fampangatsiahana, ny akora vovo-dronono PTFE efa voafafa dia alohan'ny alàlan'ny fantsom-pamokarana ram ho an'ny ptubeuce PTFE fantsona ptubeuct izay mahafeno fepetra isan-karazany. Voakasiky ny anton-javatra mifandraika toy ny fampiasana, ny masontsivana, ny akora, ny zavatra takian'ny mpampiasa, sns Masinina fantsona PTFE amin'ny famaritana samihafa. Ny polytetrafluoroethylene (polyethylene mavesatra molekiola avo indrindra) ptubeuct ptubeuced by ram tubes extruder dia be mpampiasa amin'ny simika, fitsaboana, aerospace, fanodinana mekanika, fifanakalozana hafanana ary sehatra hafa.
Suko miaraka amin'ny traikefa fikarohana sy fampandrosoana efa an-taonany maro amin'ny sehatry ny fitaovan'ny PTFE, manampahaizana manokana amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny ptubeuction ary ny fivarotana fitaovan'ny PTFE. Ny fitaovantsika dia nanompo firenena sy faritra efa-polo teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny mpanjifanay dia avy amin'ny indostrian'ny fitsaboana, indostrian'ny aerospace, indostrian'ny tafika, indostrian'ny simika, indostrian'ny fiara sy indostrialy fittings fantsom-pitaovana isan-karazany, ary Suko dia eken'ny indostrian'ny fluoroplastic iraisam-pirenena.
Tomban'ny orinasa: Fanavaozana, teknolojia, fahaiza-manao ary faharanitan-tsaina.
Asa fitoriana an'ny orinasa: Mamorona marika voalohany an'ny fitaovana PTFE manerantany. Mendrika hatokisana anao i Suko.
1. TOETRA an'ny PTFE （UHMWPE） RAM TUBE EXTRUDER
Ny ptubeuct Extruded dia manana fahombiazana avo lenta amin'ny lafiny hakitroka sy tanjaka.
PTFE ram fantsona extruder dia afaka manery fantsom-pohy tsy tapaka ary azo esorina araraka ny fepetra takiana ny fantsona.
Omeo rafitra bobongolo feno, izay misy kojakoja mifangaro mifanaraka amin'izany, rafitra fanafana sy fanamafisam-peo, rafitra fanamafisana, mpanaraha-maso ny mari-pana, sns.
Ny maripanan'ny efitrano ananan'ny zavamaniry dia tokony fehezina latsaky ny 28 ° C.
Ny fitaovana extrusion mitsangana mivoaka avy any ambony ka hatrany ambany. Ny fitaovana dia apetraka eo amin'ny lampihazo na amin'ny gorodona miaraka amin'ny haavony 2,8 metatra eo ho eo. Ny elanelam-bidy mahomby amin'ny làlan'ny longitudinal an'ny fitaovana dia mila jerena ary ny halavany ampy dia tsy maintsy omena toky eo ambanin'ny lavaka boribory raikitra amin'ny fitaovana hahafeno ny fepetra takian'ny halavan'ny extruded Tube fantsona PTFE.
3. PARAMETERA FITAOVANA
4. FAMPANDROSOANA FITAOVANA SY DIAGRAMAM-PAMASARANA FAMPIANARANA
Modelin'ny milina PFG150 PFG300 PFG500
Process Vertical Ram Extruder M / c
Power KW (Motera elektrika) 15kw 22kw 72kw
THK Fandeferana 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm
OD Fandeferana 0.1-0.5mm 0.5-2mm 3mm
Halavan'ny fantsom-panafody Tohizo ny fivoahana miaraka amin'ny halavany tsy voafetra
Output Isaky ny ora KG 8+ 10+ 13+
5. FAMPANDROSOANA FITAOVANA SY DIAGRAMAM-PAMASARANA FAMONDRANA
6. FOMBA fiasa miasa
Hamarino raha mifanaraka amin'ny kisary tariby na tariby na herinaratra ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra sy ny herin'ny herinaratra, ary ny fifandraisana misy eo amin'ny tsipika.
Zahao ny toerana misy ny menaka hydraulic ary zahao raha mifamatotra tsara ny tsipika hydraulic. Hamafiso ny fifandraisana amin'ny rano mangatsiaka sy ny rivotra mifatotra
Hamarino raha napetraka tsara ny lasitra. Mihazakazaha ary manafoana tanana raha te hanamafy.
Alefaso ny herinaratra ary apetraho ny masontsivana toy ny tsindry, ny maripanan'ny faritra mari-pana tsirairay, ny fotoana itazonana ary ny fametrahana sakafo mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny rafitra PLC.
Ampio ny vovoka efa voaomana mialoha ho an'ny hopper na barika (tanana na mandeha ho azy).
Atombohy ny milina.
Hetezo ny fantsona PTFE nesorina tamin'ny halavany.
Vonoy ny masinina ary diovy ny lasitra aorian'ny fampiasana azy.
7. FITAOVANA SY FANOMPOANA NY FITAOVANA
8. FAMPIANARANA SY FITSIPIKA FIZARANA FIZARANA
10. Aorianan'ny serivisy famarotana
11. FITAOVANA FAMPIANARANA AUTOMATIC LINE LINE an'ny PTFE
Famahanana mandeha ho azy ny vacuum, ao anatin'izany ny rafitra tsofina miverimberina mifamadika, manomboka ny rafitra fahanana, manasa fantsom-basy, basy hisoka, mpamokatra fantsona, mpanamory PCB, famoahana 30-300 kg / h, savaivony 150mm ary hahavony 600mm, mametraka fotoana fisakafoana mandeha ho azy sy fotoana fandefasana, vovoka Ny flow dia azo fehezina, ptubeuction vy tsy misy fangarony rehetra, fifehezana manan-tsaina.
Ny barika fampifangaroana dia 600mm ny savaivony ary 700mm ny hahavony, miaraka amina motera mihena 2.2kw, hafainganam-pandeha 15-25 mihodina / min, lovia ambany 8-10mm ambany, ary 75-90kg ny fahaizany.
Lisitry ny CONFIGURATION SKVQC-10:
12. FITAOVANA SAFIDY mifandraika
Modelin'ny milina Ny haavon'ny rihana ambany Haavo ny masinina Over habakabaka Machine Diameter Hole
Andalana fanorotoroana ptubeuction manapotika fitaovana Dicer, milina fanasan-damba, crusher
Mpangaro vovoka / Mpangaro vovoka sy mpanampy Afangaroy amin'ny vovo-dronono ny menaka manitra
Masinina fanapahana bara hidrolika Hetezo fantsona lehibe araka ny takiana